> Resource > Video > Sida loo sameeyo Montage Wedding la Photo iyo Video
A Montage sawir arooska cajiib ah u yeeri doono maalinta aad waligey illoobi doonin. Ma kartaan inaad qiyaasi kartaa sida ay u fududahay in aad isu video Montage ah, oo kaliya haddii aad leedahay mid caawisa oo ku wanaagsan sida Wondershare Fantashow . Waxay bixisaa qaab filim cajiib ah oo kala duwan oo aad si fudud oo hal-abuur ku samayn kartaa arooska video Montage la sawiro, videos iyo music. Sidoo kale doonaa Waxaad fursado badan si uu u badbaadiyo arooska video Montage, sida gubi in DVD, badbaadin sida iPad video, si toos ah u wadaagaan on YouTube iyo in ka badan. Just raaci tutorial hoos ka dhigi video kuu gaar ah Montage qasabno yar gudahood.
1 Dooro jecel Your Movie Style
Ka dib markii la rakibey ee gaare Montage ah, in uu saxiixo oo si fudud u bilaabi doorashada style filim. Waxaad ka heli doontaa boqolaal Hababka movie kala saaraa by jeer. Dooro mid aad jeceshahay oo guji "codso" inuu ku soo bilowdo marka aad Montage arooska.
2 dejinta Your Wedding Photo / Video Files
Ka dib markii ay soo degida sawiro ama video clips, tag "shakhsiyeeyo" tab. Si fudud u jiidi oo hoos u dari photos videos ama si aad u storyboard ah. Ama dajiyaan folder Photo / Video ka your computer. Haddii photos u baahan tafatirka, kaliya labo gool guji si ay u xaalkaa uu furmo suuqa pop up ah. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa mid ka mid ah saamaynta filter si ay sawir si ay u eegaan oo ay dareemaan sida classic dheeraad ah.
3 dar Music, Qoraaladda, Intro / Credit
Ka dib markii in, ku dar goosin ka mid ah music adigoo gujinaya "Add Music". Taasi waxay hagaajin doontaa saamaynta video Montage. Waxa kale oo aad xitaa diiwaan galin kartaa lana dar codkaaga u gaar ah oo ay ku fiiqaya in file bartilmaameedka iyo gujinaya ee "Diiwaanka" icon u sheegto sheekada keligaa. Markaas qoraalka iyo Intro / credit daro tahay in la dhamaystiro Montage video iyo macno samaynayaan-deggeedu yahay.
4 badbaadi Your Montage Wedding
Markii uu dhamaystay Montage sawirka, tag "Dhoofinta" tab, ka dibna dooranayaan ah in wax soo saarka. Tusaale ahaan, waxaad ku gubi karaa in DVD, share on YouTube, ama Save si Computer. Haddii aad rabto in aad daawato Montage sawir ku saabsan qalabka telefoonada gacanta ee, si fudud riix "Device" icon iyo filaayo in profiles waxaa la siiyaa.
Waa maxay More: Wedding Photo Montage Fikradaha
A Montage video arooska ka dhigan tahay badan. Marka aad mar kale daawato, xusuus yihiin warsidaha Garowe iyo ilmo dhididka raacitaanka. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikradaha Montage sawir arooska loogu talagalay si aad isugu daydo.
U qaybi ka Montage arooska aad dhowr cutub, tusaale ahaan, aroos ayaa kor u sii kordhaya, aroosadda ayaa kor u sii kordhaya, dhacayay jacayl, soo jeedinta, fasaxa xagaaga dheer, iwm
Dooro photos jecel. Sawir kasta waa in ay qaataan wax ka qabashada dareenka, sidoo kale sameynta qososhay dhagaystayaasha ama macaan.
Habboon songs Montage arooska si ay u sameeyaan album arooska dareenka.
Ku dar damacyadii (Ken-Burns Saamaynta). Kala duwan ka slideshow, Montage aroos u baahan dhaqaaq dheeraad ah u soo qaado arooska weli photos nolosha.
Horyaal / credits lagama maarmaan u ah sawiro. By sidaas samaynaya, madadaalada sii ama hindiga oo dheeraad ah si aad Montage arooska.
Habdhiska ku saabsan qoob arooska hore? Bilow arooska Montage video hor cayaar. Tani waxay cadaadis ku qaadan doonaa, martida ugu yihiin waxaa daawashada arooska video. (OK, ugu yaraan aad u malaynayso in si).
Dooro Montage gaare video arooska ama raadiyo bixiye Montage arooska adeegga internetka.
RMVB magaabay: Sida loo jar RMVB faylasha la Loss Tayada No